Izindaba - Izakhiwo nokusetshenziswa kwempuphu etholakala kabusha
Ukuphinda uthole amandla
I-redispersible latex powder ukusabalalisa okuyi-powdery okwenziwe nge-polymer polymer emulsion eguquliwe ngokumiswa kwesifutho. Inokuhlakazeka okuhle futhi ingaphinde ifakwe emulsified ibe yi-polymer emulsion ezinzile ngemuva kokungeza amanzi. Ukusebenza kufana ncamashi ne-emulsion yokuqala. Ngakho-ke, kuyenzeka ukuthi kukhiqizwe udaka lwekhwalithi ephezulu eyomile, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe izakhiwo zodaka.
I-latepersible latex powder iyisithako sokusebenza esibalulekile nesibalulekile sodaka. Kungathuthukisa ukusebenza kosimende, kukhulise amandla odaka, kuthuthukise amandla okubopha odaka ezakhiweni ezahlukahlukene, futhi kuthuthukise ukuguquguquka nokukhubazeka kodaka Ukumelana, amandla okucindezela, amandla we-flexural, ukumelana nemihuzuko, ukuqina, ukunamathela namandla okugcina amanzi , ukusebenza. Ngaphezu kwalokho, i-latex powder enezakhiwo ze-hydrophobic ingenza udaka lungangeni amanzi.
Umdwebo 1 umdwebo we-latex powder redispersible.
I-rexx ye-latex eyatholakala kabusha ngodaka nosiki wokubumba ine-impermeability enhle, ukugcinwa kwamanzi nokuqothulwa kokuqina, namandla aphezulu okubopha, okungaxazulula ngempumelelo ikhwalithi yokuqhekeka nokungena ngaphakathi ekhona kudaka lobumba lwendabuko. inkinga.
I-self-leveling usofa ne-floor impahla i-Redispersible latex powder inamandla aphezulu, ukubumbana / ukunamathela okuhle nokuguquguquka okudingekayo. Ingathuthukisa ukunamathela, ukumelana ne-abrasion kanye nokugcinwa kwamanzi kwezinto. Kungaletha i-rheology enhle kakhulu, ukusebenziseka nokusebenza okuhle kakhulu kokuzishelelisa phansi kukadaka lokuzilolonga phansi kanye ne-screed.
Isinamathisela i-tile, i-tile ejobayo i-ejensi eyi-redispersible latex ine-adhesion enhle, ukugcinwa kwamanzi okuhle, isikhathi eside esivulekile, ukuguquguquka, ukumelana kwe-sag kanye nokumelana okuhle kwe-thaw. Kungaletha ukunamathela okuphezulu, ukumelana okuthe xaxa nokusebenza okuhle kokwakha ukuze ukunamathela kwethayili, ukunamathela kwe-tile kungqimba futhi kunciphise ukuhlangana.
I-rexx ye-rex engangeni manzi inyusa amandla e-bond kuwo wonke ama-substrates, inciphisa imodulus, ikhuphula ukugcinwa kwamanzi, inciphisa ukungena kwamanzi, futhi inikeze imikhiqizo ngokuguquguquka okukhulu, ukumelana kwesimo sezulu kanye nokuphikisana okumanzi okuphakeme Amanzi nokuqina kwamanzi kudinga umphumela ohlala njalo uphawu uhlelo.
Umdwebo wangaphandle wokufakelwa kwangaphandle udaka olubizwa ngokuthi i-Redispersible emulsion powder kulolu donga lwangaphandle lokufakelwa kwangaphandle luthuthukisa ukubumbana kongqimba namandla okubopha ebhodini lokufaka okushisayo, ukuze ukwazi ukufuna ukufakwa futhi unciphise ukusetshenziswa kwamandla. Ukufinyelela ukusebenza okudingakalayo, amandla eguquguqukayo kanye nokuguquguquka emikhiqizweni kadaka yangaphandle yokufakelwa udaka, ungenza ukuthi imikhiqizo yakho yofaka ibe nokusebenza okuhle kokubhokisana nochungechunge lwezinto zokufakelwa nesisekelo. Ngasikhathi sinye, kuyasiza futhi ukuthuthukisa ukumelana nomthelela nokuqhekeka kokumelana nobuso.
Umdwebo 2 umdwebo we-latex redpersible powder.
Ukulungiswa kweMortar Redispersible latex powder kunokuguquguquka okudingakalayo, shrinkage, ukuhlangana okuphezulu, amandla afanele okuguquguquka nokuqina. Yenza ukhonkolo wokulungisa uhlangabezane nalezi zidingo ezingenhla zokulungiswa kukakhonkolo wesakhiwo futhi ongeyona eyokwakheka.
Isigaxa se-latex esisebenziseka kalula sisetshenziselwa ukwelapha ubuso bukakhonkolo, ukhonkolo ovulekile, isitini sesihlabathi se-lime kanye nezitini zomlotha. Ukuqhekeka, ukuxebuka, njll. Kwenza ukunamathela kuqine, kungabi lula ukuwa nokumelana namanzi, nokumelana okuhle kakhulu kweqhwa. Inomphumela obalulekile ekusebenzeni okulula, ukwakhiwa okulula.
Imikhiqizo eyimpuphu ephindaphindwayo iminingi emakethe, kepha izakhiwo zazo ziyefana ngokuyisisekelo. Zingafushaniswa kafushane kanjena:
I-Redispersible powder ungumpuphu owenziwe ngokufafaza i-polymer emulsion, ebizwa nangokuthi yirabha eyimpuphu eyomile. Le powder ingancishiselwa ngokushesha ibe yi-emulsion ngemuva kokuxhumana namanzi, futhi igcine izakhiwo ezifanayo ne-emulsion yasekuqaleni, okungukuthi, kuzokwakhiwa ifilimu ngemuva kokuphuma kwamanzi. Le filimu inokuguquguquka okuphezulu, ukumelana nesimo sezulu esiphakeme kanye nokumelana okuhle nezakhi ezahlukahlukene. Intambo ephezulu yokubopha.
Lolu hlobo lomkhiqizo lusetshenziselwa ikakhulukazi emasimini okwakha anjengokufakwa ngaphakathi kwodonga, ukuhlangana kwamathayela, ukuphathwa kokuhlangana, udaka oluhlanganisiwe, udaka lwesiteki, okwakha ingaphakathi nengaphandle lodonga, udaka wokuhlobisa, njll. Lunobubanzi bezicelo futhi buhle amathemba emakethe.
Ukugqugquzelwa kanye nokusetshenziswa kwempuphu ye-latex ephinde yathuthukisa kakhulu ukusebenza kwezinto zokwakha zendabuko, ithuthukise kakhulu ukuhlangana, ukuhlangana, amandla okuguquguquka, ukumelana nomthelela, ukumelana ne-abrasion, ukuqina, njll. Kwemikhiqizo yokwakha. Yenza imikhiqizo yokwakha ngekhwalithi yayo enhle kakhulu nobuchwepheshe obuphezulu ukuze uqinisekise ikhwalithi yamaphrojekthi wokwakha.
Isikhathi sokuthumela: Jun-08-2019